साम्राज्ञीको आरोप, ‘भुवनको घिनलाग्दो व्यवहार, मलाई जस्तै व्यवहार कति जनालाई गर्नुभयो होला’ ? « Pariwartan Khabar
साम्राज्ञीको आरोप, ‘भुवनको घिनलाग्दो व्यवहार, मलाई जस्तै व्यवहार कति जनालाई गर्नुभयो होला’ ?
केहीदिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा साम्राज्ञी र भुवनको दोहोरी चलिरहेको छ । साम्राज्ञीले केहीदिन अघि इन्ष्टाग्राममा एक भिडियो सेयर गर्दै फिल्म क्षेत्रमा आफूमाथि निकै शोषण भएको, निर्माता निर्देशकले नराम्रो व्यवहार गरेको बताएकी थिइन् ।
उनको जवाफ स्वरुप भुवनले स्टाटस लेख्दै साम्राज्ञीलाई जुन दालमा खाएको त्यहि थालमा दुलो पारेको बताएका थिए । अहिले पनि साम्राज्ञीले एक भिडियो सेयर गर्दै भुवनलाई जवाफ दिएकी छिन् ।
उनले आज भुवनको कारणले नै आफू बोल्न बाध्य भएको बताएकी छिन् । उनले भिडियोमा भनेकी छिन्, ‘कति कुराहरु मैले सहेर बसिरहेको थिए । मलाई कसैले सम्झाउने थिएनन् । नचिनेको नभेटेको मान्छेले अनेक कुरा गरिरहेको छ । मेरो काम हो मैले गर्नु पर्छ भन्ने लागेर र मेरो ममीले सपोर्ट गरेकोले यस फिल्म क्षेत्रमा आएको हो । तर मेरो परिवार फिल्म क्षेत्रको पनि होइन ।अस्तिको मेरो भनाईको बारेमा आफुलाई धेरै म्याजेस आइरहेको छ । त्यसमा एकजनाले के भन्नु भएको छ भने , जुन थालमा खायो त्यहि थालमा दुलो पार्यो ।’ उहाँले मसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो भने त्यो ठाउँ कहिलै आउथेन ।’ यो सिचोसन आएको नै उहाँले गर्दा नै आएको हो । ’
उनले लामो सास फेर्दै आफ्ना कुरा राखेकी छन् । ‘ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल इन्स्टा ,मिडिया भएका कारण नै आवाज उठाउन पाएको उनको भनाईछ । उनले आफुलाई गरेको व्यवहार उहाँले कति जनालाई गर्नु भयो होला त्यो थाहा छैन । ’ कि ती आवाजलाई कसैले सुनेनन् ।’
उनले पुराना कुरा कोट्याएकी छन् । उनले आफुलाई जापान अवार्डका बेला भुवन केसीले आफूमाथि नराम्रो व्यवहार गरेको बताएकी छन् । उनले आफुमाथी नराम्रो व्यवहार गरेको र त्यो आफुले सहेर बसेको उनको आरोप छ । भुवन केसीले अवार्डका बेला गरेको व्यवहार साम्राज्ञीले भनेकी छन्, , बाबा हेर पुरानो कुरा नकोट्या । ‘तँ त मेरो प्रोडक्ट हो । अब पुरानो कुरा कोट्याएर के फाइदा, तँ एउटा ठाउँमा पुगिसकिस् यस्तो कुरा नगर भनेर मलाई सम्झाउनुभयो । त्यतिबेला मलाई भित्रैदेखि घिन लागिरहेको थियो । तै पनि हाँसी हाँसी जस्तो सुकै पनि हाँसेर बोल्दिछु क्या ।’
ती कुराहरु भनिरहँदा भुवन केसीले आफूमाथि ह्यारेस्मेन्ट गरेको आशय व्यक्त गर्दै साम्राज्ञीले थपेकी छन्, ‘ती कुराहरु अलि टाढाबाट पनि भन्न सकिन्छ नी । गाला जोड्याएर, टाँस्सिएरै भन्नु पर्छ र रु छोरी अब यस्तो नगर है भन्दै गालामा मुख जोड्याएरै भनिराख्नुभएको थियो । तै पनि म सुनिरहेँ । उहाँलाई ‘अंकल’ भन्दा मन पर्दैन । त्यसैले मैले उहाँलाई ‘हुन्छ दाई’ भन्दै धकलेँ ।’ जाने बेलामा टेक कियर भन्दै जानुभयो । ’
साम्राज्ञीले यस्तो व्यवहार गर्ने भुवन मात्र नभएको बताइएकी छन् । उनले एकाधबाहेक नेपालका ठूला ब्यानर भनिनेहरुले नयाँ कलाकारहरुको फाइदा उठाउने र उनीहरुलाई युज गर्ने गर्ने गरेको उनको आरोप लगाएकी छन् । भिडियोमा भनेकी छन् ,आफुले देखेको कुरा भन्न त पाउँछु नि । अहिले त्यस्तो व्यवहार छैन की ?’
२८ असार २०७७, काठमाडौँ बलिउडका दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन र उनका छोरा अर्थात बलिउडका चर्चित
अमिताभसँगै उनका छोरा अभिषेकलाई पनि कोरोना
२८ असार २०७७, काठमाडौँ बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । अमिताभसँगै उनका
बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि अस्पताल भर्ना
२८ असार २०७७, काठमाडौँ बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । यो कुराको